Ngenxa okuqhubekayo kwenani abantu abanale izinwele zemvelo phansi abangela ukusabela iguliswa, sekube izinketho eziningi ukuze kufakwe endaweni yawo. Zenza imisebenzi yabo kahle, akukho isiqondiso ngezinto zemvelo. Ezinye fillers yokufakelwa zazingcono kuka zemvelo. Basuke indawo kalula ababengaphambi zabo. Nokho, amanani abo lingaphansi kunalokhu izindleko analogue zemvelo.
Izinhlobo fillers yokufakelwa
Sekuyisikhathi eside Abakhi eiderdowns, imicamelo nezingubo zokulala owethulwa ezintsha emkhakheni fillers imikhiqizo yabo.
Izinhlobo esikhundleni yokufakelwa, efana phansi yemvelo:
nanometer - phansi dada yokufakelwa sika;
Hollofayber - 100% zokwenziwa fibre. It iphuma ku amabhola ngesimo iziphethu. Indaba akakubangeli komzimba, hhayi ubamba iphunga. He is umswakama ukumelana. I yamathebhu kancane like amabhola ukotini, kodwa ngemva kokucindezelwa, elikhishiwe kwezinye izinguqulo ukuma yokuqala. Isetshenziselwa hhayi kuphela e jackets ezivamile phansi nezingubo zokulala. Hollofayber esetshenziswa amadivaysi wamathambo, ngisho ifenisha. Lokhu yamathebhu ihlinzeka egcwele futhi unempilo ubuthongo, ukusebenziseka kanye nokuphepha sezinto.
I-nanometer, Thinsulate and zokwenziwa fluff zifana ngezindlela isakhiwo kanye izakhiwo. Ziyakwazi esiseduzane kwezimpaphe zezinyoni.
Ezishisayo ukwahlukanisa izinto, afana nalawa zemvelo, Sekuyisikhathi eside kusetshenziswa embonini isikhala, impi, futhi kulezo zindawo lapho umsebenzisi kungenzeka izimo ezimbi kakhulu.
Ngokusho impahla yayo fluff yokufakelwa inezakhamuzi ezingalé ababengaphambi kwakhe. sekukudala dada zemvelo sika phansi ukupheda polyester.
fibre ehlanzekile lapho kungekho ingcina isetshenziswa, emulsion namakhemikhali ayingozi izingxenye;
amazinga aphezulu zifudumele;
It engakutholi ezimanzi;
ubuyisela ukuma yokuqala emva ukuwasha;
ke ingekho bola;
Akubonakali izinambuzane eziyingozi.
Indlu uthuli izibungu - a Imbangela enkulu izifo nomzimba. U-85% abantu uxilongwe "somoya", kufanele ezwela anda kulezi izinambuzane. Lokhu kuholela ukuthuthukiswa lesi sifo.
Isakhiwo zokwenziwa fluff
fluff Artificial anezakhi eyingqayizivele ngenxa isakhiwo material. Le micu abe ukuma Kuvunguza. Ngenxa yalokho, ziyakwazi aluhlaza, ingakuthola emoyeni kakhulu, lokho kukwenza okokusebenza libe yisivikelo esihle ezishisayo. Phakathi imicu zakhiwe izimbobo ezincane, okuyinto ungavumeli amanzi ukuze uthole ngaphakathi. Ngaphezu kwalokho, ukwaziswa iphathwa ne abicah. Lokhu kwenza kube bushelelezi. Le micu musa Roll phansi, musa sinamathele komunye nomunye, ukugxisha kalula ubuyisele ifomu ubudala.
Amakhasimende abasebenzisa imikhiqizo, lapho yamathebhu - phansi yokufakelwa, ukusekela izakhiwo kakhulu material. Lokhu kufakazelwa nesidingo esikhulayo lonke uhla.
Ngo jackets efudumele, izingubo zokulala, bedspreads, imicamelo asebenzisa ngayo ngokuphumelelayo fluff yokufakelwa. Izimpendulo ngaye bathi lento ufudumele nokuningi practical syntepon. Labo ngabantu ababeyisebenzisa esikhundleni phansi zangempela ngenxa yokusabela iguliswa, waphawula ukuthi izinto ezintsha ihlanganisa zonke izici esiyingqayizivele. Lokhu kukuvumela ukuba ngokuphepha ukugcina futhi ngokushesha ukushisa ukuze ome umkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo yokufakelwa phansi lula kakhulu.
Geza umkhiqizo nge sintipuhom kalula kakhulu. Ikhula umshini. imithetho evamile: ukubophela izinkinobho inyoka futhi usule ngaphambili ngaphandle. Maximum lokushisa - degrees 30. Isihloko zonke izimo yomkhiqizo kungenziwa wageza ngokuphindaphindiwe. Ukubukeka kanye nekhwalithi yamathebhu akusho ukuwohloka.
Zokulala kanye imicamelo
Izingubo zokulala kanye imicamelo kabanzi fluff yokufakelwa. Izibuyekezo Customer wale mikhiqizo - omuhle kuphela. Asthmatics nomzimba abanaso baye wasinda yokufuna zokulala nalezi fillers. Ngisho nje abaqondi ukuthi yini ngaphakathi zokulala noma pillows - yokufakelwa dada sika phansi. Kulula futhi kumnandi touch of umkhiqizo. Ngokuphelele futhi ngokushesha lisuswe. Ingabe ukukhonza isikhathi eside. Isikhathi esining impela, imikhiqizo ezisebenzisa phansi dada yokufakelwa sika, wathenga izingane. Ngenxa yokuthi abathathi hypoallergenic, kahle aneliseke lokhu okuqukethwe futhi bome ngokushesha, baqala ukujabulela funa ububanzi phakathi abazali abasha.
imikhiqizo yokunakekela nge fluff yokufakelwa
Imikhiqizo ezisebenzisa phansi dada yokufakelwa sika, kungenziwa wageza wokuwasha ibhukwana noma obucayi. Amazinga amanzi kumele singeqi degrees 30. Ngemva kokugeza jacket, ingubo noma isiguqo kumele ukubola zibe endaweni evundlile, wasinikeza a ukuma zemvelo. Kulesi sikhundla, umkhiqizo kufanele kube yomile. Njengoba fluff yokufakelwa - kuyinto zokwenziwa fibre, asikwazi wadalula okushisa aphakeme. Nakuba ezinye esikhundleni Racks ngokwanele futhi novivinyo olunjalo. Kunoma ikuphi kukhona isidingo ukusebenzisa yensimbi, setha lokushisa esingeqile ku-40 °. Umkhiqizo ngamunye imiyalelo ukuthi imikhiqizo ukunakekelwa. Qiniseka ukuhlola nabo ngaphambi ekuhlanzeni ayina.
It lingahunyushwa baphetha ukuthi ngaso sonke isikhathi esikhundleni yokufakelwa ayihambisani zemvelo. Endabeni phansi ubuchwepheshe obusha uye wavumela hhayi kuphela lokuphinda impahla nge ukusebenza okuhamba phambili, kodwa futhi ukuze aqede zonke izindawo zalo ezimbi.